तीनपुस्ते तीज - तीज बिशेष - साप्ताहिक
हिन्दू नारीहरूको महान पर्व तीजमा प्रत्येक वर्ष केही न केही परिवर्तन हुँदै गएको छ । धेरै वर्षअघि बुहारीहरूले सासूप्रतिको आक्रोश, श्रीमान्प्रतिको गुनासो, माइत जान एवं साडी–पोते नपाएको आदि कुरा गीतमार्फत व्यक्त गर्ने चलन थियो । बिस्तारै तीज फेरियो । अहिले कहाँमा जान्छौ रानी चरी, दैलामुनीको काँकरीको बिरुवा, भंगेरी चरीले मैदानमा लरीलररजस्ता गीत सुन्न पाइँदैन । विगतको तीजको रौनक हराउँदै गएको छ । तीज मनाउने शैली नै परिवर्तन भएको छ । गाउँघरमा बन्ने खीर एवं अन्य मिष्ठान्न भोजन हराउँदै गएका छन् । निरन्तर परिवर्तन हुँदै गएको तीजका सम्बन्धमा नेपाली कला क्षेत्रका तीन पुस्ताका तीन जना कलाकारले साप्ताहिकका रामजी ज्ञवालीसँग यस्तो धारणा राखे :
करेसाबारीकै दर खान्थ्यौ
अहिले तीज मनाउने शैली एकदमै फरक छ । विगतमा घरमा जे छ त्यही खाने, जे छ त्यही लगाउने चलन थियो । अहिलेको तीज एकदमै देखावटी भयो । विगतमा तीजको महत्व नै बेग्लै थियो । घरकै करेसाबारीमा फलेका तरकारी, फलफूल, घरमै पालिएको भैंसीको दूधबाट बनेको खीर तथा काँक्राको अचार खाँदै माइती आएका चेलीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर मनाउने तीजको रौनक अहिले वर्णन गर्न सकिँदैन । त्यो घरायसी स्वाद अहिले हराइसकेको छ । अहिले पार्टी प्यालेसमा मनाइने तीजले विगतको तीजलाई बिर्साउँदै गएको छ । तीजको महत्व निरन्तर घट्दै जाँदा मलाई एकदमै चिन्ता लाग्छ । तीजको महत्वअनुसार यो संस्कृतिलाई टिकाउन सकिएन भने तीज विस्तारै हराएर जानेछ । विगतमा कति मीठा गीत गाइन्थ्यो, अहिले त जस्ता पायो त्यस्तै गीत स्पिकरमा बजायो अनि नाच्यो । त्यतिबेला जस्तो मादल बजाएर प्रत्यक्ष गीत गाउँदै आ–आफ्ना घरका समस्या, पीर–व्यथा सुन्ने–सुनाउने चलन छैन । तीजका गीत पनि एकदमै छाडा भैरहेका छन् अहिले । आधुनिकताको नाममा हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै गएका छौं कि ?
दिदीबहिनी मादल बजाएर नाच्थ्यौ
धेरै वर्षअघिसम्म हामी निकै सामान्य हिसाबले तीज मनाउँथ्यौं । दिदीबहिनीलाई घरमा बोलाएर गाउँघरकै परिकार दरका रूपमा ख्वाउने र खाने चलन थियो । त्यतिबेला मौलिक भाका र शब्दमा आधारित गीत गाइन्थ्यों । गाउँघरका सबै महिलाहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर मादल बजाउँदै नाच्थे । तीज हाम्रो मौलिक संस्कार हो । तीजमा एउटी सौभाग्यवती महिला आफ्ना श्रीमान्को आयु बढाउन व्रत बस्छिन् । त्यसबाहेक उनी परिवारको सु:ख, शान्ति तथा समृद्धिको कामना पनि गर्छिन्, तर पछिल्लो समयको तीज देखेर म आफैं हैरान छु । अहिले एक महिना अघिदेखि तीज लाग्छ । सबैतिर गरगहनाकै प्रतिस्पर्धा छ । तीजका गीतमा मौलिकता छैन । यद्यपि मेरा लागि तिथिले जुन दिन भन्छ त्यही दिन मात्र तीज हो । म आफ्नी छोरीलाई विकृति, विसंगति र देखासिकीमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउँछु, हिजो मेरी मम्मीले सिकाएजस्तै । अहिले जसरी तीजमा विकृति हाबी हुँदै गएको छ त्यसैगरी विकृति बढ्दै जाने हो भने हाम्रो यो संस्कार हराउने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
तीज मनाउने व्यक्तिगत रहर हो
तीज कसैले मनाउँछन् कसैले मनाउँदैनन्, तर जसले मनाए पनि, नमनाए पनि यसको आफ्नै महत्व छ । नेपालमा मात्र होइन, विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूका लागि तीज ठूलो पर्व मानिँदै आएको छ । तीज जन्म दिने बुवा–आमाको काखबाट पराई घर गएका चेलीहरूलाई माइती घर फर्काउने र केही दिन आरामले बस्ने वहाना पनि हो । तीज अर्काको घरमा काम गर्दा–गर्दा थाकेकी चेलीलाई माइती घरमा रमाउने र सानैदेखि हुर्किएका, पढेलेखेका साथीभाइहरूसँग भेटघाट गराउने पर्व पनि हो यो ।
महिलाहरूले मनका वह पोख्ने र दिल खोलेर मीठा–मीठा परिकार खाने पर्व पनि हो । आधुनिकतासँगै अहिलेको तीज अलिकति फरक भएको छ । अहिले महिनादिन अघिदेखि दर खाने चलन छ । चर्चामा आउने धुनमा अनेकन प्रकारका गीत पनि बनिरहेका छन् । जे–जस्तो गीत ल्याए पनि मौलिकतालाई धक्का दिने खालका गीत ल्याउनु हुँदैन । बाँकी कसले कसरी तीज मनाउँछ, के खान्छ, के लगाउँछ भन्ने कुरा व्यक्तीगत रुचि र रहरको विषय हो ।
प्रकाशित :भाद्र २५, २०७५
कसका लागि व्रत ?
गीतमा परदेशीको पीडा
ज्योतिको नयाँ रूप
यस्तो पो गीत
युवाका लागि पहिरन
तीज बिशेषबाट अरु
तीजमा फिट रहन भाद्र १५, २०७६
तीज स्टाइल भाद्र १५, २०७६
विदेशमा तीजको रौनक भाद्र १५, २०७६
तीजः पहिले र अहिले भाद्र १५, २०७६
महिला स्वतन्त्रताको पर्व भाद्र १५, २०७६
हङकङको सुनको चुरा भाद्र १५, २०७६
तीज मनाउने स्वतन्त्रतामा अंकुश भाद्र १५, २०७६
महत्व तीजको भाद्र १५, २०७६
तीज मेकअप तथा स्किन केयर भाद्र १४, २०७६
तीजका पहिरन भाद्र १४, २०७६